Wasiirka Maaliyada Oo kulan la qaatey Duqa Gobolka Banaadir:(Sawiro) – hareerley News
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in xarunta Wasaaradda Maaliyadda uu maanta kula kulmay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish iyo ku-xigeenkiisa arrimaha Maaliyadda Ibraahim Dheere.
Wuxuu sheegay Wasiir Beyle in arrimaha ay ka wada hadleen ugu muhiimsan tahay dar dargelinta howlaha lagu kobcinayo dakhliga dalka iyo sare u qaadista kaabayaasha dhaqaalaha.
“Arimaha ugu muhiimsan ee aan ka wada hadlay waxaa ka mid ahaa wada shaqeynta iyo dar-dar gilinta howlaha lagu kobcinayo Dakhliga Dalka,” ayuu yiri Wasiir Beyle.
Sidoo kale, Wasiirka Maaliyadda Xukuumadad Soomaaliya ayaa sheegay in dhammaantood ay ka go’an tahay in si wadajir ah ugu wada sahqeeyaan horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Maayarka magaalada ugu weyn dalkaasi Barazil ee Sao Paulo ayaa sheegaya in habka caafimaad ee magaalada uu qarka u saaran yahay inuu bur-buro oo waxaa laga cabsi qabaa iney isbitaalada buux dhaafaan. Waxaa sare u sii kacayso baahida loo qabo sariiraha la seexiyo dadka uu aadka usoo ritay fayraska corona. Bruno Covas ayaa sheegay in […]
Xiisado Dagaal Oo Saakay ka taaagan Gobolka Sanaag
Waxaa xiisad dagaal saakay laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Sanaag taas oo u dhaxeeysa Ciidamo kala taabacsan Maamulada Puntland iyo Soomaaliland, iyada oo badi dadka ku nool Gobolkaasi ay cabsi soo wajahday. Xiisada ayaa waxaa ay sigaar ah uga taagan tahay Magalada Badhan iyo deegaanada hoostaga, sida ay risaala u sheegeen dad ku sugan […]
Qarax kale Oo Galabta Casarliiqii ka dhacay Ex-koontorol Afgooye
Wararka ka Imaanya Magaalada Muqdisho ayaa Sheegaya in Qarax uu ka dhacay Galbta Casarliiqii Agagaarka Ex Control Afgooye. Qaraxa ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay wadada aada Macalin Nuur iyadoo Labo Qof ay ku dhaawacmeen sida goob joogayaal ah sheegeen. Jugta qaraxa ayaa laga maqlay Meelo kala duwan,waxaana lagu sheegay in Miinada dhulka […]